प्रक्रिया र पद्धतीभन्दा वाहिर कुनै काम हुदैन : दाहाल - समायोजन खबर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम प्रसाद दाहाल,दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका ।
मुलुक सङघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारीहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका हुंदै नागरिक सामू पुगेका हुन् । काम कारवाहीका क्रममा कतीपय कर्मचारी विवादमा तानिएका छन् । कतीपयले उदाहरणीय काम गरेर वाहवाही कमाएका भेटिन्छन् । खाशगरी स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका कर्मचारीका पीडा के छन्, जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्ध कस्तो छ ? यहि विषयमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम प्रसाद दाहालसँग समायोजन खबर डटकमले गरेको समसामयिक कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी आउन नमान्ने सुनिन्छ । तपाई आउनुभएको छ । काम/कारवाही कस्तो चलिरहेको छ ?
नेपालको संविधानको नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहले एउटा सरकारको रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, यहाँ नेपाल सरकारको कोही न कोही प्रतिनिधिहरु उपस्थित गराउनुपर्ने आवश्यकता भइरहेको अवस्था हुंदा हामी कर्मचारीले कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ र स्थानीय तह अथवा बाहिर नेपाल सरकार अन्तरगत जहाँ गएर पनि काम गर्नुपर्छ त्यही कामका क्रममा हामी पनि यहाँ आएका छौ ।
को मान्छे आउछ/आउदैन भन्दा पनि उसको चाहानाका विषय पनि हो । र, सबै ठाउँमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि आउँछन् । स्थानीय तहमा के कस्तो वातावरण छ त्यसले पनि भर पार्ने भएकाले यहाँ काम गर्नलाई कर्मचारी आउन असहज मानेको देखिन्दैन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावै अभाव छ । यसले कतीको अफठ्यारो पारेको छ ?
हाम्रोमा मात्रै हैन सवै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । हाम्रोमा पनि अभाव छ । पालिकाभीत्र १९ जना कर्मचारी दरबन्दी भएकाभीत्र स्थायी रुपका चारजना कर्मचारीबाट मात्रै काम भइरहेको छ । अरु केही प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई करारमा राखेका छौ । प्रशासनिक काम गर्नलाई अफ्ठ्यारो छ । प्रशासनिक कर्मचारी हामीले करारमा राख्न पाउने अवस्था पनि छैन । कानुनी वन्देज भएकाले प्राविधिक कर्मचारी मात्रै राखेर भए पनि यहाँको कामलाई रात दिउँसो गरेर त्यही चारजना कर्मचारीको भरमा कामकाज सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।
कतीपय कामहरु प्रक्रिया र पद्धतीभन्दा वाहिर गएर हुन्छ भन्छन नि ?
प्रक्रिया र पद्धतीभन्दा वाहिर गएर कुनै पनि काम हुदैन । त्यही प्रक्रिया र पद्धतीलाई अवलम्बन गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्थायी किसिमका कर्मचारीहरु निति र नियम अनुसार कामकाज गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयबाट प्रक्रिया र पद्धती मिलाउनकै लागि कर्मचारी पठाएको हो । र, सवैले प्रक्रिया र पद्धती अनुसार मात्रै काम गर्छन हामीले पनि त्यही अनुसार काम गर्छौ ।
राजनीतिक दवाव कतीको आउछ । त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनीतिक दवाव अहिलेसम्म मैले महशुष गरेको छैन । राजनीतिक दवाव उहाँहरुको काम गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, काम गर्ने कुरालाई लिएर छिटोछरितो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई उहाँहरु दत्तचित्त हुनुहुन्छ । त्यसमा प्रक्रिया र पद्धती मिचेर काम गर्नु भन्ने किसिमको राजनीतिक दवाव मलाई र यो अफिसमा आएको छैन र, त्यो हामीले गर्न पनि सक्दैनौ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु कतीपय योजनाहरु चलाउन भित्री रुपमा सामेल हुन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
छैन, नितान्त आरोप मात्रै हो । यो गाउँपालिकामा चाँहि कर्मचारीहरुले कुनै पनि योजनामा आफू संलग्नता हुने, योजनाको विषयवस्तुसँग आफू संलग्न भएका काम गर्ने भन्ने किसिमका प्रक्रियाहरु अहिलेसम्म दखिएको छैन । त्यो हुनु पनि हुदैन र, त्यो भएको थाहा पाइयो भनेदेखी म, कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने भएकाले उहाँहरु माथि कानुनी कारवाही हुन्छ । त्यो गरेको छैन ।
सेवाग्राही कामको हतारो गर्ने अनि त्यस काम सक्नलाई कर्मचारीहरुले कमिसन माग्ने भन्ने गुनासो छ नि ?
यो कही, कुनै पनि शर्तमा सत्य छैन । स्थानीयहरुले आफ्नो योजना फरफारक गर्छन् । काम गर्छन् । प्राविधिकहरुले रिपोर्ट लिएर आउँछन् । प्रशासनिक रुपमा लेखाले गर्ने काम लेखाले गर्छ, प्रशासनिक योजनाले गर्ने काम योजनाले गर्छ । नियमित रुपमा काम गर्छन् र यसरी यस्ता किसिमका नाजायज फाइदा लिने, गैर कानुनी लाभ लिने किसिमका कामहरु यो गाउँपालिकामा छैन । त्यो हुनै सक्दैन ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा योजना फछ्र्यौट गराउने क्रममा प्राविधिकहरुले अनावश्यक दुःख दिने, कमिसन माग्ने भन्ने आरोप छ नि ?
हैन, यो गाउँपालिकामा हामीसँग पाँचजना प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले स्टीमेटका लागि पठाउछौ, स्टीमेट निश्चित तोकिएको छ । त्यसपछि मुल्याङकनका लागि हामीले कसलाई तोक्ने भन्ने कुरालाई प्रशासनिक रुपमा कुन ठाउँको मुल्याङकन गर्न को जाने भन्ने उनीहरुलाई निश्चित हुदै हुन्न । हामी आफूले पठाउँछौ र, को जाने भन्ने निश्चित हुदैन । त्यसैले गर्दाखेरी उनीहरुले यस किसिमको नाजायज फाइदा लिन सक्ने संम्भावना नै छैन ।
उनीहरुले यो काम गरेको अवस्था पाइयो भने हामी कारवाही पनि गर्छौ । र, कही पनि प्राविधिक कर्मचारीले नाजायज फाईदा लिन्छन् भन्ने किसिमका कुरा सत्य हैन । कसैले, कोही मान्छेले आफूले भनेको अनुसारको काम गर्दिएन भनेर उनीहरुले आरोप मात्रै लगाएको हुनसक्छ । प्राविधिक रुपमा निश्चित काम हुन्छ, ‘एस’ र ‘नो’ मात्रै हुन्छ । उनीहरुको फाइदाका लागि प्राविधिकले काम नगर्दिएको कारणले यस किसिमको आरोप लगाएको हुनसक्छ तर, हैन । हाम्रो प्राविधिक कर्मचारीले त्यो काम गर्दैन ।
“हामीले यो ठाउँमा आएर निजामती कर्मचारीले बिहान दश बजेदेखी साँझ पाँज बजेसम्म मात्रै काम गर्ने भनेका छैनौ । हामीले बिहान, बेलुका जुनसुकै समयमा आएर उहाँहरुको काम गर्छौ । उहाँहरुलाई पनि टाढा छ । यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौ । यहाँबाट उहाँहरुको घरसम्म पुग्नलाई दुई, तीन घण्टा लाग्छ । यहाँ बसेर खाने ठाउँ छैन, अनि त्यस किसिमले गर्दाखेरी सकेसम्म बेलुका १० बजेसम्म बसेर भए पनि उहाँहरुको काम सकेर पठाइदिने भन्ने हाम्रोे मान्यता छ । ”
ठूलाको मात्रै कुरा सुन्ने, कागजी प्रक्रिया पुगे पनि सानाको काममा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति यहाँ के छ ?
यो हजुरले कहाँबाट प्रश्न ल्याउनुभयो, कुनै पनि शर्तमा यो संम्भावना नै छैन । ठूलोको सानोको भन्ने नै छैन । हामी भनेको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने, कानुन र विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो वर्ग हो । त्यो वर्गले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको कामलाई क्रमबद्ध रुपमा हामीले फछ्र्यौट गर्ने हो । अझ त्यसमा पनि अलिक टाढाकालाई अलिक प्राथमिकता दिएर काम गर्ने, नजिककालाई तपाई एकछिन वस्नुस है भनेर उहाँलाई राखेर टाढाकालाई अलिक छिटो पठाउने निति भएकाले ठूलाको, सानाको भन्ने नै हुदैन । सवै नागरिक हुन् । गाउँपालिकाभरीका सबै नागरिक समान हुन् । समान व्यवहार गर्नुपर्छ र समान रुपमा उनीहरुले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने यहाँका सम्पुर्ण कर्मचारी वर्गको धारणा छ ।
गाउँघरमा आएको कर्मचारीबाट जनताले कतीको छिटो/छरितो काम पाएका छन् ?
हाम्रो बिचारमा सकेसम्म सेवा सुविधा छिटो दिएका छौ । तर, कहिलेकही के हुनसक्छ भने थोरै कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरी सवै फाँटमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएर अलिकती, एकछिन, एक घण्टा, दुई घण्टा ढिलो हुन सक्ला तर, यति थोरै कर्मचारीले पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरुले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईहरुको काम कारवाहीमा जनता र जनप्रतिनिधि कतीका खुशी छन् ?
हामीले बुझे अनुसार जनता र जनप्रतिनिधिहरु खुशी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीले यो ठाउँमा आएर निजामती कर्मचारीले बिहान दश बजेदेखी साँझ पाँज बजेसम्म मात्रै काम गर्ने भनेका छैनौ । हामीले बिहान, बेलुका जुनसुकै समयमा आएर उहाँहरुको काम गर्छौ । उहाँहरुलाई पनि टाढा छ । यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौ । यहाँबाट उहाँहरुको घरसम्म पुग्नलाई दुई, तीन घण्टा लाग्छ । यहाँ बसेर खाने ठाउँ छैन, अनि त्यस किसिमले गर्दाखेरी सकेसम्म बेलुका १० बजेसम्म बसेर भए पनि उहाँहरुको काम सकेर पठाइदिने भन्ने हाम्रोे मान्यता छ । त्यो कामका लागि राजनीतिक रुपमा नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष ज्यू पनि आफै संलग्न भएर आफू पनि कार्यकक्षमै बसेर काम फछ्र्यौट गरेर मात्रै हिड्ने भन्ने उहाँको आफ्नो ध्येय भएको र उहाँहरुले हामीलाई पनि साथ दिनुभएकाले असन्तुष्टि छ भन्ने लाग्दैन ।
अझै काम सहज बनाउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ।
पहिलो कुरा कर्मचारी पूरा हुनुप-र्यो हामीसँग, पूरा कर्मचारी भयो भने आ–आफ्नो फाँटको आ– आफूले गरेर निश्चित समयमा काम पूरा हुन्छ । र, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समग्रमा राज्यको विकास, स्थानीय तहको विकासका लागि एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । उनीहरुको सहयात्राबाट मात्रै छिटो काम सम्पन्न हुन्छ । छिटो विकास हुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो कामका लागि आफ्नो योजना सञ्चालनदेखी लिएर सवै कुरामा राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र कर्मचारी वर्गले पनि ‘उहाँहरुको नीति तथा कार्यक्रमलाई सधैभरी, हामीले उहाँहरुको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने हामी पक्ष हौ ।’ त्यस कारणले गर्दाखेरी हामीले यो काम गर्नुपर्छ/भन्नुपर्छ र यदि नमिल्ने अवस्था भए यतियति कारणले गर्दा मिल्न सक्दैन भनेर जनताको अगाडी हैन, नागरिकको अगाडी हैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । र, त्यो छलफलको प्रक्रिया पनि यो गाउँपालिकामा अगाडी बढेको छ ।
कर्मचारी अभावका समाधान केके हुन् ?
पहिलो कुरा नेपाल सरकारले पूरा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो गाउँपालिकाबाट धेरै कर्मचारीहरु संघमा समायोजन भइसकेका छन् । उहाँहरुलाई राखीराख्न नसकिने अवस्था हुनसक्छ । छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ती गर्दिनु प-र्यो एउटा, र, यहाँ बसिरहेका केही कर्मचारीहलाई केही मात्रामा सुविधाहरु बढाएर उहाँहरुलाई उत्प्रेरित गरेर, सुविधाले मात्रै उत्प्रेरित हुदैन उसलाई दिनुपर्ने धन्यवाद, उसले पाउनुपर्ने ‘गुडवील’ उसँग गर्ने व्यवहार, राजनीतिक रुपमा गर्ने व्यवहार, त्यसले मान्छेहरुलाई कती प्रभावित गर्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा त्यस किसिमको कर्मचारीप्रती जनप्रतिनिधिको अपनत्व सिर्जना भयो भने कर्मचारी वस्न पनि सक्छ । भोलीका दिनमा उसले यहाँ दत्तचित्त भएर काम पनि गर्न सक्छ र, समग्रमा नेतृत्व नै सवभन्दा ठूलो कुरो हो ।
नेतृत्व ठूलो कुरा भएकाले नेतृत्वले कर्मचारीलाई सधैभरी यिनीहरु मेरा सहयात्री हुन् । यिनीहरुको सहयोगबाट मात्रै पालिकालाई संमृद्ध बनाउन सक्छु भन्ने किसिमको धारणा राखेर उहाँहरुप्रती अपनत्व सिर्जना भयो भने कर्मचारीहरु वस्न रुचाउँछन् । किनभने ऊ जहाँ गए पनि जागिर खाने हो, सेवा गर्ने हो । त्यस कारणले अर्को ठाउँमा गए पनि सेवा नै गर्नुपर्छ, यहाँ पनि गर्नुपर्छ । यहाँ अपनत्व भएपछि उसले यही वस्न पनि रुचाउँछ । त्यसमा अलिकती असुविधा हुंदाहुदै पनि । विकट ठाउँ भए पनि त्यही ठाउँमा बसिरहन सक्छ । मप्रती अपनत्व छ जनप्रतिनिधिहरुको भन्ने भयो भने कर्मचारीहरु टिकीरहन सक्छन् र वाहिरका कर्मचारी पनि आउन इच्छुक हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।
हामी कर्मचारी वर्ग हौ । कर्मचारीले जहाँ गए पनि सेवा गर्नुपर्छ । सेवाका दौरानमा जनप्रतिनिधिबाट सकेसम्म कम दवाव आउन् । यहाँभन्दा अन्यत्र केही दवाव आएको छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ । केही काममा कर्मचारी माथि जनप्रतिनिधिबाट नराम्रा किसिमका व्यवहारहरु भएको सुन्नमा आएको छ । त्यस किसिमको नभएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचमा सहयात्रा भयो भने समग्र पालिकाको विकास हुन्छ । पालिकाको विकास भन्नु नै समग्र राष्ट्रको विकास हो । र, सवै नागरिकले आफूलाई सुखी,संमृद्ध देख्न सक्छन भन्ने मलाई लाग्छ । प्रस्तुती चिसाङ शेर्पा
२०७६ साउन ०३ गते बिहान ७ः४१ मा प्रकाशित